Go’aanka Maxkamadda ICJ rafcaan ma laha balse waxaa jira 3 duruufood oo dib u eegis keeni kara | Dayniile.com
Home Warkii Go’aanka Maxkamadda ICJ rafcaan ma laha balse waxaa jira 3 duruufood oo...
Go’aanka Maxkamadda ICJ rafcaan ma laha balse waxaa jira 3 duruufood oo dib u eegis keeni kara
Maxay Beri ka filanaysaa Soomaaliya Maxkamadda ICJ?
Sida Caadiga ah Maxkamadda markii ay gebo-gabayso dhagaysiga Dacwadda waxa ay gashaa Showr ay kaga doodayso Kiiska hor-yaalo “deliberations”, marka ay Garsoorayaasha u codeeyaan Cod aqlabiyad ah ama Go’aan kali kali ah hadba sida ay u dhacdo codaynta sida ay jideenayaan Qodobada 55, 57 Xeerka Maxkamadda ICJ iyo Qodobka 95/2 Xeer hoosadka Maxkamadda ICJ (rules of court, 1978), waxa uu farayaa Xeerka in la xadido ku dhawaaqista fadhi furan ama xiran marka ay jiraan xaalado, laguna war-galiyaa dhinacyada Wakiiladoodo in lagu dhawaaqayo Dacwadda sida ku xusan Q. 94/1-aad ee Xeer-hoosaadka Maxkamadda “rules of court, 1978” iyo Qodobka 58-aad ee Xeerka Maxkamadda ” ICJ STATUTE”.
Sida uu xaqiijiyey Ra’iisal wasaare ku xigeenka Mahadi Guuleed, Maxkamadda waxay ku war-galisay dhinacyada in ay xukun kasoo saari doonto 12 October 2021, taas oo ka dhigan sida ay jidaynayaan qodobadaas in lagu dhawaaqayo Xukunkii Dacwadda Kenya iyo Soomaaliya, lana soo dhameeyey.
Awoodda Xukunka ICJ.
Xukunka Maxkamadda ICJ waa mid Kama dambays ah, mana leh rafcaan sida ku cad Q. 60/1-aad ee Xeerka Maxkamadda balse waa dhici kartaa xaalado kooban oo dib-loo furi karo, Waxaa kamid ah xaaladahaas;
1. Marka uu ka yimaado dhinac codsi la xariiro Fasiraada xukunka “”Requests for the Interpretation” ama codsi fasiraad xukunka “scope of the judgment “.
2. Waxaa kale oo dhinaca qasaaray uu dalban karaa dib- u eegis in lagu sameeyo xukunka haddii uu helo xaqiiqooyin cusub oo wax-kataraya Dacwadda kana maqnayd, taas oo aan ku dhicin gaabis dhankiisa ah, waana in lagu dalbadaa 6-bilood gudahood, waxaana dib loo furi karaa Dacwadda, sida ay nidaaminayaan Q. 61-aad ee Xeerka Maxkamadda iyo Q. 99-aad ee Xeer-hoosaadka Maxkamadda.
3. Haddii ay jiraan wax-kabadalo ama ku daris ay dhinacyada isku raacansyihiin una soo gudbiyaan Maxkamadda, maxkamadda waxay leedahay tix-galin marka laga reebo xaalado koobaan “MODIFICATIONS PROPOSED BY THE PARTIES ” sida uu Nidaaminayo Q. 101-aad ee Xeer-hosaadka Maxkamadda.
Maxay Beri ka filanaysa Soomaaliya Maxkamadda ICJ?
Dooda Soomaaliya ee qaabka Xaddeynta badda ee ku salaysan “Equidistance principle” waa mid wafaqsan Heshiiska Caalamiga ee badaha, The United Nations Convention on the Law of the Sea “UNCLOS 1982” iyo Xeerarka badda Soomaaliya Xeer n. 37, 1972-dii,Xeer N. 5, 1989-kii iyo Xeerarka badda Kenya ” Territorial Waters Act 1972, Act No. 2 of 1972), “The Maritime Zones Act, 1989”.
Sidaas darteed waxay ka qabtaa rajo wayn in Maxkamadda ay taageeri doonto doodeeda, waxaa kale oon badnayn in ay dalbato Kenya Dib u eegis maadaama aysan jirin xaqiiqooyin maqan oo la ogyahay, horeyna ay isu difaaci waysay, balse way dhici kartaa in ay codsi fasiraad dalbato.
Qalinkii: Mohamed Abdikadir
Previous articleDigniin weeraro Qaraxyo ah oo la shaaciye iyo Goobalah lala doonaayo
Next articleCiidamada DFS oo degaanno kala wareegay Al-Shabaab hoostaga G/Gedo.
Wararka ka imaanaya Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Xiisad dagaal iyo hub urursi u dhexeeya laba beelood, ay ka taagan tahay degaanka Xananbuurre oo...
Al-shabaab oo sheegtay in Weerar ka dhacay Gedo ay ku dishay...
Dhageyso: Qareenka Soomaaliya u doodayay oo sharxay cabirka dhul-badeedka ay heshay...